Hunter: Sida Loo Helo B2B Ciwaanka Iimaylka Lala Xidhiidho ilbidhiqsiyo gudahood
Waxaa jira waqtiyo aad runtii u baahan tahay inaad hesho ciwaanka iimaylka si aad ula xidhiidho saaxiibkaa oo aanad ku lahayn buugga ciwaanka. Had iyo jeer waan la yaabanahay, tusaale ahaan, inta qof ee leh akoon LinkedIn oo ka diiwaangashan ciwaanka emailka shakhsi ahaaneed. Waanu isku xidhan nahay, sidaa darteed kor baan u fiiriyaa, iimayl u dhiibaa… ka dibna waligay jawaab kama helin. Waxaan dhex mari doonaa dhammaan fariimaha tooska ah ee dhexmara baraha bulshada iyo jawaabta
Sida TikTok Loogu Isticmaalo Suuqgeynta B2B
TikTok waa warbaahinta bulshada ee ugu kobaca badan adduunka, waxayna awood u leedahay inay gaarto in ka badan 50% dadka qaangaarka ah ee Mareykanka. Waxaa jira shirkado badan oo B2C ah oo qabanaya shaqo wanaagsan oo ka faa'iidaysiga TikTok si ay u dhisaan bulshadooda oo ay u kaxeeyaan iibyo badan, u qaado Duolingo's TikTok tusaale ahaan, laakiin maxaynu u aragnaa suuqgeyn ganacsi-ganacsi badan (B2B) TikTok? Summada B2B ahaan, way fududahay in la caddeeyo
Tirakoobka Suuqgeynta Mawduuca B2B ee 2021
Jimce, Maarso 18, 2022 Jimce, Maarso 18, 2022 Douglas Karr
Suuqgeeyaha Mawduuca Elite wuxuu sameeyay maqaal si cajiib ah u dhammaystiran oo ku saabsan Tirakoobka Suuqgeynta Macluumaadka oo ganacsi kastaa uu dheefshiido. Ma jiro macmiil aynaan ku darin nuxurka suuq-geynta taas oo qayb ka ah istaraatiijiyadooda suuq-geynta guud. Xaqiiqdu waxay tahay in iibsadayaasha, gaar ahaan ganacsi-ku-ganacsi (B2B), iibsadayaasha, ay baarayaan dhibaatooyinka, xalalka, iyo bixiyayaasha xalalka. Maktabadda tusmada ee aad horumarisay waa in lagu bixiyaa dhammaan tafaasiisha lagama maarmaanka u ah in iyagana laga siiyo jawaab
Canabka gudaha, Champagne Out: Sidee AI u Bedeshaa Funnelka Iibka
Khamiista, Febraayo 17, 2022 Khamiista, Febraayo 17, 2022 Jonathan Spier
Bal u fiirso dhibaatada haysata wakiilka horumarinta iibka (SDR). Dhallinyarada ku jira xirfaddooda oo inta badan ku gaaban waayo-aragnimada, SDR waxay ku dadaalaysaa inay horay u sii wado iibka org. Hal mas'uuliyadoodu waa: inay qoraan rajooyin lagu buuxinayo dhuumaha. Markaa way ugaarsadaan oo ugaadhsadaan, laakiin had iyo jeer ma helaan meelaha ugu fiican ee ugaarsiga. Waxay abuuraan liisaska rajada oo ay u maleynayaan inay fiican yihiin waxayna u diraan marinka iibka. Laakiin qaar badan oo ka mid ah rajadoodu kuma habboona